Show All Most Popular Cutlery YKKO Cook @House Menu Frozen Product Kyay Oh Tom Yum Kyay Oh Mala Kyay Oh Shue Shae Si Chet Chinese Cuisine Chinese Meal Box Satay Grills Fried Wonton Combo Set Soup Seafood Juice
YKKO Cook @House Menu
Tom Yum Kyay Oh
Mala Kyay Oh
Chinese Meal Box
YKKO -47th-Urban Asia
G-08, Ground Floor, Corner of Maharbandula Road & 47th Road,, Yangon, MM Botahtaung
G-08, Ground Floor, Corner of Maharbandula Road & 47th Road,, Yangon, MM Botahtaung Founded in 1988, With 37 branches now all over Myanmar. YKKO's goal is to deliver more of quality Kyay-Oh and to share their food with everyone in Myanmar. Inspired by the simplicity of the dish, we began making Kyay-Oh in Yankin suburb, where the first restaurant, Yankin Kyay-Oh was opened. Later, when we openedasecond shop on Saya San road, we abbreviated the original name to YKKO. Since then, YKKO has sought to accentuate the Kyay-Oh dining experience by placing emphasis on convenience, clean and tasty noodles.
Kyay Oh Si Chat (Large) (ကြေးအိုးဆီချက်ပွဲကြီး) (ကွေးအိုးဆီခကျြပှဲကွီး)
Choice of chicken, fish cake, pork or pork rib
Kyay Oh (Large) (ကြေးအိုးပွဲကြီး) (ကွေးအိုးပှဲကွီး)
Mini Kyay Oh Si Chat (မီနီကြေးအိုးဆီချက်) (မီနီကွေးအိုးဆီခကျြ)
Mini Kyay Oh (မီနီကြေးအိုး) (မီနီကွေးအိုး)
Chicken Satay (ကြက်ဆာတေး) (ကွကျဆာတေး)
Fried Wonton (ဖက်ထုပ်ကြော်) (ဖကျထုပျကွျော)
Si Chet with Steamed Chicken (ကြက်ပေါင်းဆီချက်) (ကွကျပေါငျးဆီခကျြ)
Pork Satay (၀က်ဆာတေး) (ဝကျဆာတေး)
Mashed Potato (အာလူးထောင်း) (အာလူးထောငျး)
Pepper Soup with Pork (၀က်အာပူလျှာပူ) (ဝကျအာပူလြှာပူ)
Cook@Home Kyay Oh (1pax) (Frozen)
Cook@Home Kyay Oh Si Chet (1pax) (Frozen)
Cook@Home Vegetarian Mala Noodle Kyay Oh Sichet (Frozen)
Cook@Home Vegetarian Tom Yum Noodle Kyay Oh (Frozen)
Cook@Home Vegetarian Spicy Noodle Sichet (Frozen)
Cook@Home Mashed Potato (Frozen)
MB0001. Pork Ball -1pkt (25pcs) (ဝက်သားလုံး)(ဝကျသားလုံး)
MB0002 . Fish Cake Ball -1pkt (25pcs) (ငါးဖယ်လုံး)(ငါးဖယျလုံး)
MB0003. Frozen Pork Stick -1pkt (4 sticks) (ဝက်ကင်)(ဝကျကငျ)
MB0004. Frozen Chicken -1pkt (2 pcs) (ကြက်ကင်)(ကွကျကငျ)
MB0005. Frozen Chicken Wing -1pkt (4 sticks) (တောင်ပံကင်)(တောငျပံကငျ)
MB0006. Steamed Chicken -1pc (ကြက်ပေါင်း)(ကွကျပေါငျး)
MB0007. Steamed Pork Rib -2pcs (နံရိုးပေါင်း)(နံရိုးပေါငျး)
Home Made Kyay Oh (HM ကြေးအိုး) (HM ကွေးအိုး)
Home Made Kyay Oh (HM ကြေးအိုးဆီချက်) (HM ကွေးအိုးဆီခကျြ)
All Meat Kyay Oh (အသားစုံကြေးအိုး)(အသားစုံကွေးအိုး)
Special All Meat Oh (အသားစုံ‌အိုးရှယ်)(အသားစုံ‌အိုးရှယျ)
Tom Yum Kyay Oh (တုန်ယမ်းကြေးအိုး) (တုနျယမျးကွေးအိုး)
Tom Yum Kyay Oh with Vegetable (တုနျယမျးကွေးအိုးသတျသတျလှတျ) (တုန်ယမ်းကြေးအိုးသတ်သတ်လွတ်)
Mala Kyay Oh (မာလာကြေးအိုး) (မာလာကွေးအိုး)
Mala Kyay Oh Si Chat (မာလာကြေးအိုးဆီချက်) (မာလာကွေးအိုးဆီခကျြ)
Mala Kyay Oh with Vegetable (မာလာကွေးအိုးသတျသတျလှတျ) (မာလာကြေးအိုးသတ်သတ်လွတ်)
Mala Kyay Oh Si Chat with Vegetable (မာလာကွေးအိုးဆီခကျြသတျသတျလှတျ) (မာလာကြေးအိုးဆီချက်သတ်သတ်လွတ်)
Shue Shae Soup (ရှူးရှဲအရည်) (ရှူးရှဲအရညျ)
Shue Shae Si Chat (ရှူးရှဲဆီချက်) (ရှူးရှဲဆီခကျြ)
Shue Shae Si Chat with Vegetable (ရှူးရှဲဆီခကျြသတျသတျလှတျ) (ရှူးရှဲဆီချက်သတ်သတ်လွတ်)
Si Chet with Chicken (ကြက်သားဆီချက်) (ကွကျသားဆီခကျြ)
Si Chet with Steamed Pork Ribs (နံရိုးပေါင်းဆီချက်) (နံရိုးပေါငျးဆီခကျြ)
All Meat Kyay Oh Si Chat (အသားစုံကြေးအိုးဆီချက်)(အသားစုံကွေးအိုးဆီခကျြ)
Special All Meat Kyay Oh Si Chat (အသားစုံကြေးအိုးဆီချက်ရှယ်)(အသားစုံကွေးအိုးဆီခကျြရှယျ)
Fried Dumpling Prawn (Mee Ni) ပုဇွန်ဖက်ထုပ်ကြော် (မြီးနီ)/ ပုဇှနျဖကျထုပျကွျော (မွီးနီ)
Fried Flat Fish and Salad Carrot (ငါးသားပြားကြော် နှင့် ဥနီသုပ်)(ငါးသားပွားကွျော နှငျ့ ဥနီသုပျ)
Thai Style Minced Chicken ကြက်စဉ်းကော (ထိုင်းစတိုင်)/ ကွကျစဉျးကော (ထိုငျးစတိုငျ)
Onion Ring Stuffed (Prawn) ကြက်သွန်ကွင်းအစာသွပ် (ပုဇွန်)/ ကွကျသှနျကှငျးအစာသှပျ (ပုဇှနျ)
Fried Chicken Ball (ကြက်သားလုံးကြော်)(ကွကျသားလုံးကွျော)
Fried Spicy (ခြောက်စပ်)(ခွောကျစပျ)
Bean Shrimp Paste Sweet Curry (Rice) ပဲငါးပိအချိုချက် (ထမင်း)/ ပဲငါးပိအခြိုခကျြ (ထမငျး)
Basil Curry (ပင်စိမ်းဟင်း)(ပငျစိမျးဟငျး)
Prawn with Potato Stuffed (ပုစွန် အာလူးအစာသွပ်)(ပုစှနျ အာလူးအစာသှပျ )
Prawn Tampura (ပုဇွန်တန်ပူရာ)(ပုဇှနျတနျပူရာ)
Eggplant Pot (ခရမ်းသီးမြေအိုး)(ခရမျးသီးမွအေိုး)
Fish Sausage (Garlic Fried Rice) ငါးသားချောင်း (Garlic ထမင်းကြော်)/ ငါးသားခြောငျး (Garlic ထမငျးကွျော)
Prawn Flavour (Rice) ပုဇွန်အရသာ (ထမင်း)/ ပုဇှနျအရသာ (ထမငျး)
Shiitake Fried Spicy (Garlic Fried Rice) Shiitake ခြောက်စပ် (Garlic ထမင်းကြော်)/ Shiitake ခွောကျစပျ (Garlic ထမငျးကွျော)
Basil Bean (Garlic Fried Rice) ပင်စိမ်းမွှေးပဲတောင့် (Garlic ထမင်းကြော်)/ ပငျစိမျးမှေးပဲတောငျ့ (Garlic ထမငျးကွျော)
Thai Style Red Curry (Rice) ယိုးဒယားအနီရောင်ချက် (ထမင်း)/ ယိုးဒယားအနီရောငျခကျြ (ထမငျး)
Thai Style Red Curry (Garlic Fried Rice) (ယိုးဒယားအနီရောင်ချက်)(Garlic ထမင်းကြော်)(ယိုးဒယားအနီရောငျခကျြ)(Garlic ထမငျးကွျော)
Bean Shrimp Paste Red Curry (Garlic Fried Rice) ပဲငါးပိအချိုချက် (Garlic ထမင်းကြော်)/ ပဲငါးပိအခြိုခကျြ (Garlic ထမငျးကွျော)
Thone Mal Oyster (သုံးမယ်ခရုဆီ)(သုံးမယျခရုဆီ)
Fried Rice with Red Basil (Prawn) အနီရောင်ပင်စိမ်းထမင်းကြော် (ပုစွန်)/ အနီရောငျပငျစိမျးထမငျးကွျော (ပုစှနျ)
Wing Black Pepper (Garlic Fried Rice) တောင်ပံငရုတ်ကောင်းမွှေး (Garlic ထမင်းကြော်)/ တောငျပံငရုတျကောငျးမှေး (Garlic ထမငျးကွျော)
Fried Prawn Ball (Garlic Fried Rice) ပုဇွန်လုံးအစပ်ကြော် (Garlic ထမင်းကြော်)/ ပုဇှနျလုံးအစပျကွျော (Garlic ထမငျးကွျော)
Cashew Curry (Garlic Fried Rice) သီဟိုဠ်စေ့ဟင်း(Garlic ထမင်းကြော်)/ သီဟိုဠျစဟေ့ငျး(Garlic ထမငျးကွျော)
Fried Rice (ထမင်းကြော်)(ထမငျးကွျော)
Steamed Rice (ထမင်းပေါင်း)(ထမငျးပေါငျး)
Pa Shu Fried Rice (ပသျှူးထမင်းကြော်) (ပသြှူးထမငျးကွျော )
Fried Noodle (ခေါက်ဆွဲကြော်)(ခေါကျဆှဲကွျော)
Malaysia Fried Noodle (မလေးခေါက်ဆွဲကြော်)(မလေးခေါကျဆှဲကွျော)
Fried Vermicelli (ကြာဇံကြော်)(ကွာဇံကွျော)
Steamed Rice with Pork Belly (ဝက်သုံးထပ်သားထမင်းပေါင်း)(ဝကျသုံးထပျသားထမငျးပေါငျး)
Steamed Rice with Grilled Pork Neck (ဝက်ဂုတ်သားကင်ထမင်းပေါင်း)(ဝကျဂုတျသားကငျထမငျးပေါငျး)
Fried Rice with Onion (ကြက်သွန်ဖြူ ထမင်းကြော်)(ကွကျသှနျဖွူ ထမငျးကွျော)
Plain Marrow Shoot (ဂေါ်ရခါးညွန့်ပလိန်း)(ဂျေါရခါးညှနျ့ပလိနျး)
Plain Water Spinach (ကန်ဇွန်းပလိန်း)(ကနျဇှနျးပလိနျး)
Mushroom Water Spinach (မှိုကန်စွန်း)(မှိုကနျစှနျး)
Plain Kailan (ကိုက်လန်ပလိန်း)(ကိုကျလနျပလိနျး)
Kailan Oyster (ကိုက်လန်ခရုဆီ)(ကိုကျလနျခရုဆီ)
Fried Mix Vegetable (သီးရွက်စုံကြော်)(သီးရှကျစုံကွျော)
Thai Style Papaya Pounded (ယိုးဒယားသ‌င်္ဘောသီး‌ထောင်း)(ယိုးဒယားသ‌င်ျဘောသီး‌ထောငျး)
Prawn Bean Vermicelli Papaya Pounded (ပုဇွန်ပဲကြာဇံသ‌င်္ဘောသီး‌ထောင်း)(ပုဇှနျပဲကွာဇံသ‌င်ျဘောသီး‌ထောငျး)
Meal Box 1 - Rice+ Stir Fried Basil Leaves with meat + Stir Fried Taiwan Mustard with Egg (ထမငျးဖွူ ၊ ပငျစိမျး ၊ ထိုငျဝမျမုနျညငျးကွကျဥကွျော) (ထမင်းဖြူ ၊ ပင်စိမ်း ၊ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်းကြက်ဥကြော်)
Meal Box2- Rice+ Stir Fried Basil Leaves with meat + Mix Vegetable (ထမငျးဖွူ ၊ ပငျစိမျး၊ သီးရှကျစုံကွျော) (ထမင်းဖြူ ၊ ပင်စိမ်း၊ သီးရွက်စုံကြော်)
Meal Box3- Rice+ Fried minced meat + Stir Fried Taiwan Mustard with Egg (ထမငျးဖွူ ၊ စငျးကော ၊ ထိုငျဝမျမုနျညငျးကွျော) (ထမင်းဖြူ ၊ စင်းကော ၊ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်းကြော်)
Meal Box4- Rice+ Spicy Bean Curd with meat Curry+ Stir Fried Chayote Leaves (ထမငျးဖွူ ၊ ပဲပွားအစပျခကျြ၊ မုနျညငျးဖွူကွျော) (ထမင်းဖြူ ၊ ပဲပြားအစပ်ချက်၊ မုန်ညင်းဖြူကြော်)
Meal Box5- Rice+ Golden Peas with meat+ Stir Fried Chayote Leaves (ထမငျးဖွူ ၊ ဘိုစားပဲကွျော ၊ ဂျေါရခါးညှနျ့ကွျော) (ထမင်းဖြူ ၊ ဘိုစားပဲကြော် ၊ ဂေါ်ရခါးညွန့်ကြော်)
Meal Box6- Rice+ Long Peas with meat+ Stir Fried Cauliflower with Egg (ထမငျးဖွူ ၊ ပဲတောငျ့ရှညျကွျော၊ ပနျးပှငျ့ကွကျဥကွျော) (ထမင်းဖြူ ၊ ပဲတောင့်ရှည်ကြော်၊ ပန်းပွင့်ကြက်ဥကြော်)
Meal Box7- Rice+ Fried Cauliflower & Bell Pepper with meat+ Stir Fried Cauliflower, Broccoli & Baby Coen (ထမငျးဖွူ ၊ ပနျးငွုပျပှစိမျး၊ ပနျးပှငျ့ဥနီပွောငျးဖူးသေးကွျော) (ထမင်းဖြူ ၊ ပန်းငြုပ်ပွစိမ်း၊ ပန်းပွင့်ဥနီပြောင်းဖူးသေးကြော်)
Meal Box 8 - Rice+ Hot & Sour meat+ Stir Fried Chayote Leaf (ထမငျးဖွူ ၊ အသားခြဥျစပျ၊ ဂျေါရခါးညှနျ့ကွျော) (ထမင်းဖြူ ၊ အသားချဉ်စပ်၊ ဂေါ်ရခါးညွန့်ကြော်)
Meal Box9- Rice+ Hot & Sour Bean Curd + Mixed Vegetable Tempura (ထမငျးဖွူ ၊ ပဲပွားခဉျြစပျ ၊ သီးစုံတနျပူရာ) (ထမင်းဖြူ ၊ ပဲပြားချဉ်စပ် ၊ သီးစုံတန်ပူရာ)
Meal Box 10 - Rice+ Mala Si Chat + Fried Chicken Wings (ထမငျးဖွူ ၊ မာလာဆီခကျြ ၊ ကွကျတောငျပံကွျော) (ထမင်းဖြူ ၊ မာလာဆီချက် ၊ ကြက်တောင်ပံကြော်)
Meal Box 11 - Rice+ Shue Shae Si Chat with Chicken + Fried Chicken Wings (ထမငျးဖွူ ၊ ရှူးရှဲဆီခကျြ (ကွကျ)၊ ကွကျတောငျပံကွျော) (ထမင်းဖြူ ၊ ရှူးရှဲဆီချက် (ကြက်)၊ ကြက်တောင်ပံကြော်)
Meal Box 12 - Fried Rice+ Kyay Oh Si Chat with Chicken + Chicken Satay (ထမငျးကွျော ၊ ကွကျကွေးအိုးဆီခကျြ ၊ ကွကျဆာတေး) (ထမင်းကြော် ၊ ကြက်ကြေးအိုးဆီချက် ၊ ကြက်ဆာတေး)
Meal Box 13 - Pashew Fried Rice+ Kyay Oh Si Chat with Chicken + Chicken Satay (ထမငျးကွျော ၊ ကွေးအိုးဆီခကျြ (ကွကျ) ၊ ဆာတေး (ကွကျ)) (ထမင်းကြော် ၊ ကြေးအိုးဆီချက် (ကြက်) ၊ ဆာတေး (ကြက်))
Meal Box 14 - Garlic Fried Rice+ Tom Yum Soup + Chicken Satay (ကွကျသှနျဖွူထမငျးကွျော ၊ တုနျယမျးဟငျးခြို ၊ ကွကျဆာတေး) (ကြက်သွန်ဖြူထမင်းကြော် ၊ တုန်ယမ်းဟင်းချို ၊ ကြက်ဆာတေး)
Meal Box 15 - Garlic Fried Rice+ Fried Fish Finger + Salad (ကွကျသှနျဖွူထမငျးကွျော၊ ငါးသားခြောငျးကွျော ၊ အသုပျ) (ကြက်သွန်ဖြူထမင်းကြော်၊ ငါးသားချောင်းကြော် ၊ အသုပ်)
Meal Box 16 - Garlic Fried Rice+ Fried Prawn Ball + Stir Fried Kailan (ကွကျသှနျဖွူထမငျးကွျော ၊ ပုဇှနျလုံးအစပျကွျော ၊ ကိုကျလနျကွျော) (ကြက်သွန်ဖြူထမင်းကြော် ၊ ပုဇွန်လုံးအစပ်ကြော် ၊ ကိုက်လန်ကြော်)
Meal Box 17 - Garlic Fried Rice+ Crispy Shiitake Spicy + Grilled Fruit (ကွကျသှနျဖွူထမငျးကွျော ၊ Shiitake ခွောကျစပျ ၊ အသီးကငျ) (ကြက်သွန်ဖြူထမင်းကြော် ၊ Shiitake ခြောက်စပ် ၊ အသီးကင်)
Meal Box 18 - Garlic Fried Rice+ YKKO Omelette + Stir Fried Watercress (ကွကျသှနျဖွူထမငျးကွျော ၊ YKKO Omelette ၊ ကနျစှနျးရှကျကွျော) (ကြက်သွန်ဖြူထမင်းကြော် ၊ YKKO Omelette ၊ ကန်စွန်းရွက်ကြော်)
Fish Satay (ငါးဆာတေး) (ငါးဆာတေး)
Grilled Pork (၀က်သားကင်) (ဝကျသားကငျ)
Pork BBQ (၀က်သား BBQ) (ဝကျသား BBQ)
Grilled Chicken (ကြက်ကင်) (ကွကျကငျ)
Chicken BBQ (ကြက်သား BBQ) (ကွကျသား BBQ)
Grilled Mutton (ဆိတ်သားကင်) (ဆိတျသားကငျ)
Mutton BBQ (ဆိတ်သား BBQ) (ဆိတျသား BBQ)
Grilled Fish (ငါးကင်)(ငါးကငျ)
Grilled Prawn (ပုဇွန်ကင်) (ပုဇှနျကငျ)
Grilled Chicken Sibu (ကြက်ဆီဗူးကင်) (ကွကျဆီဗူးကငျ)
Grilled Vegetable (အသီးကင်) (အသီးကငျ)
Grilled Mushroom (မှိုကင်) (မှိုကငျ)
Grilled Corn (ပြောင်းဖူးကင်) (ပွောငျးဖူးကငျ)
Fish Combo Set A
Prawn Combo Set B
Chicken Combo Set C
Assorted Combo Set D
3 in 1 Soup (သုံးမျိုးစပ်) (သုံးမြိုးစပျ)
Chicken Feet Hot & Sour Soup (ကြက်ခြေထောက်စွတ်ပြုတ်) (ကွကျခွထေောကျစှတျပွုတျ)
Seafood Kyay Oh (ပင်လယ်ကြေးအိုး)(ပငျလယျကွေးအိုး)
Special Seafood Kyay Oh (ပင်လယ်စာကြေးအိုးရှယ်)(ပငျလယျစာကွေးအိုးရှယျ)
Seafood Kyay Oh Si Chat (ပင်လယ်စာကြေးအိုးဆီချက်)(ပငျလယျစာကွေးအိုးဆီခကျြ)
Special Seafood Kyay Oh Si Chat (ပင်လယ်စာကြေးအိုးဆီချက်ရှယ်) (ပငျလယျစာကွေးအိုးဆီခကျြရှယျ)
Prawn Kyay Oh (ပုဇွန်ကြေးအိုး) (ပုဇှနျကွေးအိုး)
Special Prawn Kyay Oh (ပုဇွန်ကြေးအိုးရှယ်) (ပုဇှနျကွေးအိုးရှယျ)
Prawn Kyay Oh Si Chat (ပုဇွန်ကြေးအိုးဆီချက်)(ပုဇှနျကွေးအိုးဆီခကျြ)
Special Prawn Kyay Oh Si Chat (ပုဇွန်ကြေးအိုးဆီချက်ရှယ်)(ပုဇှနျကွေးအိုးဆီခကျြရှယျ)
Lime juice (သံပုရာဖျော်ရည်) (သံပုရာဖြျောရညျ)
Sweet Lime Juice (ရှောက်ချိုသီးဖျော်ရည်) (ရှောကျခြိုသီးဖြျောရညျ)
Orange Juice (လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်) (လိမ်မျောသီးဖြျောရညျ)
Avocado Juice (ထောပတ်သီးဖျော်ရည်) (ထောပတျသီးဖြျောရညျ)
Pineapple Juice (နာနတ်သီးဖျော်ရည်) (နာနတျသီးဖြျောရညျ)
Strawberry Juice (စတော်ဘယ်ရီသီးဖျော်ရည်) (စတျောဘယျရီသီးဖြျောရညျ)
Papaya Juice (သဘောင်္သီးဖျော်ရည်) (သဘောင်္သီးဖြျောရညျ)
Watermelon Juice (ဖရဲသီးဖျော်ရည်) (ဖရဲသီးဖြျောရညျ)
Sunkist juice (ဆန်းကစ်သီးဖျော်ရည်) (ဆနျးကဈသီးဖြျောရညျ)
Tamarind Juice (မန်ကျည်းဖျော်ရည်) (မနျကညျြးဖြျောရညျ)
Grass Jelly Juice (ကျောက်ကျောဖျော်ရည်) (ကြောကျကြောဖြျောရညျ)
Tragacanth (ဆေးကုလားမ) (ဆေးကုလားမ)
Yoghurt (ဒိန်ချဉ်) (ဒိနျခဉျြ)
Choice of sugar, plum sugar or honey
Plum Juice (ဇီးဖျော်ရည်) (ဇီးဖြျောရညျ)
Than Buu (သံဗူးဖျော်ရည်) (သံဗူးဖြျောရညျ)
Milk with Orchid Juice (နို့သစ်ခွဖျော်ရည်) (နို့သဈခှဖြျောရညျ)